Alchemy - WoW Guides | WoW Guides
La simia dia asa iray anazarana ny ahitra mamorona ody majika izany dia hanome antsika tombontsoa maro samihafa.
Zandalari sy Kul Tiran Alchemy Guide - Avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 175
Aloha! Amin'ity torolàlana ho an'ny Zandalari Alchemy sy Kul ity dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 175 dia hampianatra anao ny fomba handehananao ny lalana ...
Alchemy amin'ny ady ho an'i Azeroth
Salama daholo. Androany aho dia mitondra tidbits anao momba ny asan'ny Alchemy amin'ny Battle for Azeroth. Resipeo rehetra sy ...
Torolàlana Alchemy 1-800
ny Adrian Da Cuna hace 6 taona .
Aloha! Amin'ity Torolàlana Alchemy ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianatra anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra mankany ...
Misiona Alchemy ao Legion
Aloha! Tongasoa eto amin'ny torolàlana Alchemy Missions ao Legion. Amin'ity toro-lalana ity izahay dia mitondra anao ny iraka rehetra sy ...
Alchemy Guide in Legion - Raiso ny fomba fahandro rehetra
Aloha! Alchemy in Legion, toy ny sisa amin'ireo asa, dia novaina tamin'ny lafiny maro. On…
Draenor Alchemy Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
ny Adrian Da Cuna hace 7 taona .
Aloha! Tongasoa eto amin'ny torolàlana Alchemy of Draenor izay hanampianay anao hahatratra ny ambaratonga 700.
Torolàlana Alchemy 525-600
Avelako ianao miaraka amin'ny Alchemy Guide hiakatra hatramin'ny 525 ka hatramin'ny 600. Alchemy dia iray amin'ireo ...
Torolàlana Alchemy 1-525
Niverina ny Deathwing ary niova ny zava-drehetra. Betsaka ny zava-baovao ... Nefa eto izahay mitondra torolàlana momba ny fomba fampidinana ny Asa Alchemy amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525.
Alchemy dia iray amin'ireo asa ilaina indrindra isan'andro amin'ny fihinanana potion / elixir na transmutations lafo. Soso-kevitra ny hanambatra ny asa miaraka Herbalism. Ho fanampin'izany, tsara ny mitsidika ny trano fanaovana lavanty ary manandrana mivarotra ny zavatra noforoninay satria na dia ambany aza ny haavony dia olona maro no hanana tarehin-tsoratra hafa manomboka. Amin'ny tranga ratsy indrindra amin'ny tsy fahaizana mivarotra na inona na inona, ampiasao hatrany izy io ho tombontsoantsika manokana na ho an'ny tarehin-tsoratra ho avy izay angoninay.
Te hahita ilay Vato Filozofa ve ianao? Ka inona no andrasanao? !!
Torolàlana Alchemy 450-525
Ny tanjon'ity torolàlana ity dia ny hampiseho aminao ny fomba mora indrindra hiakaranao Alchemy avy amin'ny haavo 450 ka hatramin'ny 525. Angamba mbola tsy nampakatra ianao Alchemy manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 450, aza adino ny mitsidika ny anay Torolàlana Alchemy hahatratra ny haavon'ny max alohan'ny hanombohan'ny Cataclysm. Ho an'ity dia tsy hampiasa afa-tsy amin'ny herisetra na novidiana tamin'ny mpivarotra izahay. Niezaka ny hampiasa fitaovana vitsivitsy araka izay tratra izahay.
Mba handrosoana ao Alchemy, mila ireo zavamaniry vaovao nampidirina ao Cataclysm isika. Ity dia Ash Flower, Windvine, Voil of Azshara, Flower Flower, Twilight Jasmine, ary Whiptail.
Afaka manomboka amin'ny haavo 425 isika amin'ny fanaovana Syrup ady.
Torolàlana Alchemy 1 - 450
ny Elizabeth hace 13 taona .
Ny torolàlana ho an'ny Alchemist Haneho anao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny haavon'ny asa Alchemy anao amin'ny 1 hatramin'ny 450 fandaniana faran'izay kely araka izay azo atao.
Alchemy ampiarahina amin'ny Herbalism, dia lasa asa roa izy ireo izay mamela anao hanangona volamena be dia be; Eo anelanelan'ny fanangonana zavamaniry sy potion dia azo antoka fa hihatsara ny vola miditra.
Aza adino ny mitsidika ny Torolàlana momba ny fitsaboana hanamorana ny fiakarana.